Rasaasa News – Jijiga: Maxaa ka Jira in Maan-Dooriye Lagu Mudo Maxaabiista Atobiya?
Jijiga: Maxaa ka Jira in Maan-Dooriye Lagu Mudo Maxaabiista Atobiya?
on February 25, 2014 4:48 am
Jijiga, Feb 25, 2014 – Waxaa laga yaabaa in dad badan kolka ay arkaan ciwaanka, ay kolkiiba u arkaan qoraaga mucaarad. Akhristow waxaad ogaataa, warbaahinta shaqadeedu in ay tahay sheegid xun iyo san, waxa dalka ka dhaca, si ay dadwaynuhu xog ogaal ugu noqdaan. Warbaahintaas ayey kali taliyeyaashu ku sheegaan mucaarad, marka ay sheegaan khaladkooda.
Degaanka Somalida Atoobiya, waxaa uu ka mid yahay meelaha aduunka ugu colaada dheer. Meelaha ugu colaada badan, waa meelaha ugu dhibaatada badan aduunka. Meelahaas oo wax walba oo xun ka suurto galaan.
Degaanka Somalida Atoobiya waa dhul go,odoon ah, oo aad u dib dhacsan, isla markaasna aan loo ogolayn in ay gasho warbaahinta aduunku. Waxaa kale oo degaanka Somalidu ka mid yahay meelha lagu hubo shidaal badan.
Hadaba, si aanay aduunyada xorta ah, u ogaan waxa ka jira gabalka Ogadeen, waxaa loo diidaa in ay gasho warbaahin madaxabanaan.
Waxaa kale aan la ogolayn in ay galaan hayadaha aan dawliga ahayn iyo kuwa dawliga ah, marka laga reebo shaqaalaha Atoobiyanka ah ee u shaqeeya hayadaha, kuwaas oo ku shaqeeya rabitaanka dawlada.
Wargays laga leeyahay dalka Israa,iil ayaa qortay 2009-kii, in ciidanka cusub ee degaanka Somalida Atoobiya uu isticmaalo maandooriye. Qoraalkaas cidii akhriday way fajacay mana raad qaadin. wargaysku wuxuu qoray “in ciidanka Liyuu Boolis [LB], ay fuliyaan hashii ciidanka federalka Atoobiya.” Taasna ay ugu wacan tahay waxyaabo raashinka loogu daro iyo kiniinka dheeraya gaajada oo ay ku jiraan maandooriye.” Wargayska ayaa sheegay in maandooriyeyaashan laga keeno dalka Israa,iil iyo dalka Hindiya.
Degaanka Somalida dadka degan waa Somali, Muslim Suni ah 100%, sida ay rumaysan yihiin, in kasta oo tira koobta Atoobiya ay qorto 94% Muslim, 6% Masiixi. Ciidanka LB, kuma jiro hal shakhsi oo fuliya waajibka ay diinta Islaamku farayso. Waxayna cuntada iyo cabitaanka kala mid yihiin ciidanka federalka Atoobiya.
Falalka ka fog diinta iyo dhaqanka ee ay ku kacaan ciidanka LB, waxay cadayn u noqon karaan qaadashada maandooriyaha la sheegay. Waxaa si cad ay dadwaynaha degaanku ugu og yihiin ciidanka LB, cabida khamriga iyo cunida hilibka doofaarka.
Waxaan su,aashaas waydiinay saddexdii madaxwayne ee ugu dambeeyey maamulka degaanka su,aal ah “shanta tiir Islaamka iyo lixda Iimaanka,” way garan waayeen. Waxaa kale oo aaan waydiinay in ay wax ka og yihiin, qaadasha maandooriyaha la sheegay in ay qaataan ciidanka LB, arintaas waxaa shaki ka muujiyey Cabdulahi Xasan Lugbuur oo haatan ku nool dalka New zealand.
Dhinaca kale, waxaa la sheegay in maxaabiista laga qabto ururka ONLF, qaarkood lagu duray maandooriyaha sida la sheegay. Waxaa tusaale loo qaatay Cabdi Nuur Yooyaan, oo la sheegay in lagu duray maandooriye, sida la sheegay, waxaa lagu arkay dabeecado aan hore loogu aqoon.
Waxaa maalmahan dhagaha dadka xiiseeya Somalida Ogadeniya ama Degaanka Somalida aad ugu badnaa afduubka labo sarkaal oo ONLF ah. Taas oo degaanka Somalidu sheegay in ay iskood isu soo dhiibeen, ayna TV ka soo dayn doonaan.
Waa labo arimood oo aad u kala duwan, laakiin marka la eego labada hadal, kan ONLF ayaa hada la rumeeyey. Sheegashadii degaanku runta iyo caqliga way ka fogtahay.
Dad xog ogaal oo ka tirsan maamulka, ayaa sheegay in Sulub iyo Cali lagu duray maandooriye, lana filayey in la maamuli doono maskaxdooda. Arintaas oo suurto gal noqon wayday, taas oo loo malayn caanaha Geela, labada waxay ku koreen caano geel, sidaas daraadeedna way adkaatay in la maamulo jirkooda. Waxaana la sheegay in haatan ay la il daran yihiin maandooriye xad dhaaf ah oo lagu daray dhiigooda.
Qaadashada maandooriyaha ayaan ku koobnayn LB, laakiin waxaa la sheegay in lagu iibiyo dukaamada degaanka, isaga oo lagu sheego kiniin madax xanuun [sida Faja oo aad looga cuno degaanka]. Maandooriyeyaasha ayaa isugu jira kuwa adag oo toos loo siiyo LB iyo kuwa fudud dadwaynuhu, u cunaan si dawo ahaan ah.